ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား (မြင်ကွင်းကျယ်) - ဝိကိပိဒိယ
(Periodic table (large version) မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤနေရာသို့သွားရန် -	အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​ဤသည်မှာ ပုံကြီးချဲ့ထားသည့် ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယားဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် အတော်မစ်အမှတ်များ၊ သင်္ကေတများ၊ အတော်မစ်အလေးချိန်များ၊ ဒြပ်စင်တစ်ခုစီ၏ သဘာဝအတိုင်းရှိနေသော ပေါင်းစပ်မှုတန်ဖိုးများကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ The periodic table of the chemical elements isatabular method of displaying the chemical elements. Although precursors to this table exist, its invention is generally credited to Russian chemist Dmitri Mendeleev in 1869. Mendeleev intended the table to illustrate recurring ("periodic") trends in the properties of the elements. The layout of the table has been refined and extended over time, as new elements have been discovered, and new theoretical models have been developed to explain chemical behavior.
၁ Periodic Table
Relative atomic mass Helium
↑ "The periodic table of the elements", International Union of Pure and Applied Chemistry, 2007-07-22. Retrieved on 2008-02-08. ရှု • ပြော • ပြင်
* Name etymology (symbol)
* Electron configurations
* 1 (Alkali metals)
* Book:Periodic table
"http://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား_(မြင်ကွင်းကျယ်)&oldid=144554" မှ ရယူရန်	ကဏ္ဍ: Articles containing potentially dated statements from March 2010Articles with invalid date parameter in templateAll articles containing potentially dated statementsFeatured listsPeriodic table	Navigation menu
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ မေ​၂၀၁၂ ရက် ၁၆:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။